AbaHlengi abalungileyo mabaKhathathele ingcaciso
Ngokusoloko kuthiwa ubuchopho babantu banezinhlangothi ezimbini ezihlukeneyo, kunye necala langasekhohlo lijongene nolwimi, ingqiqo kunye nemathematika, ngelixa i-right handles the ability of space, ukuqaphela ubuso kunye nokucubungula umculo.
Ulungiso luninzi lwenkqubo engamacandelo omibini, omnye esiwahlula njengemida kunye nokulungiswa kwemveliso. Ukuhlelwa kwezinto ezincinci kusebenzisana neengcali zobugcisa, i-nut-and-bolts imiba yokubhalwa kweendaba .
Ulungiso lwe-macro lujongene nomxholo wamabali .
Nantsi uluhlu lokutshekisha kwamanqaku amancinci kunye nokuhlelwa kwemveliso:
• I- AP Style
• Ingeniso - ingaba ingqiqo, ingabe ixhaswa lilonke ibali, ingaba kuluhlu lokuqala?
• Ibali - ngaba lihle, lilinganise kwaye linenjongo?
• I-Libel - ingaba kukho na iinkcazo ezinokuthi zithathwe njengento engathandekiyo ?
• Izinto - ibali elipheleleyo kwaye lipheleleyo? Ngaba kukho "imingxuma" ebalini?
• Ukubhala-ngaba ibali libhalwa kakuhle? Ngaba icacile kwaye iyaqondakala?
Uhlobo lomntu noHlelo
Njengoko unokucinga, iintlobo ezithile zobuntu mhlawumbi zingcono kwenye uhlobo lokuhlela okanye enye. Ukuchaneka, abantu abajoliswe kwintlalo mhlawumbi bahle kakhulu kwi-micro-editing, ngelixa iifayile ezinkulu-mfanekiso zigqwesa kakhulu kwi-macro-editing.
Iinkcukacha ezincinci kunye nomxholo weendaba
Kwaye kwindlu yamaphephandaba, ngokukodwa kwiivenkile ezinkulu zeendaba, kukho uhlobo lwesigaba esincinci sezabasebenzi .
Khuphela abahleli bedesksi ngokubanzi bagxininise iinkcukacha ezincinci -grama, i-AP Style, iziphumlisi kunye njalo. Abahleli bemiSebenzi abaqhuba iindawo ezihlukeneyo zeendaba zeedolophu, ezemidlalo, ezobugcisa kunye nokuzonwabisa kunye nokunye-ngokubanzi bagxininise ngakumbi kwicala elibanzi lezinto, umxholo wamabali.
Kodwa nantsi i-rubber - umhleli omhle unokukwazi ukwenza zombini kunye nokuhlelwa kwezinto ezinkulu, nokwenza kokubili kakuhle.
Oku kuyinyani ngokukodwa kwiimpapasho ezincinci kunye namaphephandaba omfundi, okuqhelekileyo anabasebenzi abambalwa.
Ukungafunyanwa kwiinkcukacha ezincinane ukuLahla umfanekiso omkhulu
Ngamanye amagama, kufuneka ube nomonde ukulungisa igrama, iilwimi ezingekho phantsi kwamagama kunye neengxaki zeempompo . Kodwa awukwazi ukuzivumela ukuba uthinteke kwiinkcukacha ezincinci ezilahlekelwa ngumfanekiso omkhulu, oko kukuthi, ingabe ibali lebali liba nengqiqo? Ngaba umxholo ubhalwe kakuhle kwaye unenjongo ? Ingaba ihlanganisa zonke iziseko kwaye iphendule yonke imibuzo umfundi anokuba nayo?
Ingongoma enkulu yile - zombini i-micro- and macro-editing ibaluleke kakhulu. Unokuba nebali elibhaliweyo ngokubalulekileyo kwihlabathi, kodwa ukuba lizaliswe ngamaphutha ezitayela ze-AP kunye namazwi angaphangeliyo ke ezo zinto ziyakucima kwibali ngokwayo.
Ngokufanayo, unako ukulungisa yonke igrama yokuziphatha kunye neempophulo eziphambeneyo kodwa ukuba ibali alinakucacisa, okanye ukuba umgca ungcwatywa kwisiqendu sesibhozo, okanye ukuba ibali lichanekile okanye liqulethe umxholo ongeyonto, ke zonke izilungiso ozenzayo ziphumelele ' imali eninzi.
Ukuze sibone oko sithethayo, jonga ezi zivakalisi:
Amapolisa athi athabathe amathathu ama-dollar angama-dollar ye-cocain kwiyiphi i-massiv.
I-CEO ye-Exon iqikelele ukuba i-5% yeenzuzo zenkampani iya kuphinda ihlulwe kwi-resarch kunye nophuhliso.
Ndiqinisekile ukuba uqikelele ukuba ezi zivakalisi ziquka ngokukodwa ukulungiswa kwamancinci. Kwisivakalisi sokuqala, "i-cocaine" kunye "enkulu" ibhalwe ingalunganga kwaye inani le dollar alithobeli i-AP Style. Kwisivakalisi sesibini, "Exxon," "kulinywa" kunye "nophando" ayifakekanga, ipesenti ayilandelanga i-AP Style, kwaye "inkampani" idinga i-apostrophe.
Ngoku, jonga ezi zivakalisi. Umzekelo wokuqala uthetha ukuba ube ngumvuzo:
Kwakukho umlilo endlwini ebusuku. KwakuseSitalato saseNtloko. Umlilo wawushisa indlu kunye nabantwana abathathu ngaphakathi babulawa.
I-CEO, owaziwayo ngenxa yobuntu bakhe bendoda-mali, wathi uya kuvala umbane xa ilahlekelwa yimali.
Apha sibona iingxaki ezinkulu zokulungisa.
Umzekelo wokuqala izivakalisi ezintathu ubude xa kufanele kube yinto enye, kwaye ibandakanya into ebalulekileyo ebalini - ukufa kwabantwana abathathu. Isivakalisi sesibini sibandakanya ukunyaniseka okungabonakaliyo - "i-CEO yemali."
Njengoko unako ukubona, nokuba ngaba yinkqubo emancinci okanye yokuhlela, umhleli omhle kufuneka abambe yonke impazamo kwibali ngalinye. Njengoko abahleli baya kukuxelela, akukho ndawo yokuphambuka.
Ukulungiselela iSicwangciso seSifundo seDynamic